Dad is uruursaday oo dilay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Dad is uruursaday oo dilay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab
Dad is uruursaday oo dilay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Sarkaal sare oo ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay degaanka Yaaqbari ee Gobalka Shabeelaha Hoose sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiinta amniga ee degmada.
Sarkaalaan oo qaabilsanaa degmada Wanlla-Wayn ee Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa la sheegay in ay dileen dadka degaanka waxaana degaanka Yaaqbari-wayne ka taagan xiisad arintaasi ka dhalatay oo u dhaxeysa Al-shabaab iyo dadka degaanka.
Dadka Yaaqbari Weyne ayaa meydka Sarkaalka la dilay oo magaciisa lagu soo koobay Gar-Gaduud usoo qaatay Wanl-Weyn, waxaana halkaas isugu soo baxay dadweyne badan.
Sarkaalka Al-Shabaab laga dilay ayaa xukumi jiray dhammaan 40-ka Tuulo ee hoos timaado Degmada Wanlaweyn.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee BFS ayaa xaqiijiyay in dadweyne ku nool degmada Wanlla-Wayn ay dileen Sarkaan oo ka tirsanaa Al-shabaab.
Xildhibaan Jeesow ayaa soo dhoweeyay arintaan waxa uuna ku baaqay in Ciidamada ay isgarab taagan shacabka degmadaasi.
Ururka Al-Shabaab ayaa dhawr jeer iska caabin xoog leh kala kulmay dadka shacabka kadib markii ay u dulqaadan waayeen cadaadiska ay Al-Shabaab saarayaan iyo lacagaha badan ee laga dalbanayo.
Meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya ayey dad shacab ah dagaal kula galaan Ururka Al-Shabaab, Cabdalla Biroole oo 40Km qiyaas ahaan u jirto Magaalada Kismaayo ayaa ah meeshii dhibaatada ugu badneyd loogu geystay Al-Shabaab kadib markii ay isku dhaceyn dad shacab ah oo weliba hal beel ah kuwaas oo ku guuleystay inay Al-Shabaab ku qasbaan wadahadal ay uga baxaan Tuuladaas oo hadda gacanta ugu jirto dad shacab ah.
Sidoo kalana waxaa Shabaab lagu qasbay inay bixiyaan Diyada dadkii ay laayeen iyo Geel ay dadka shacabka ah ka dhaceyn.
Dhanka kale Shabeelada Dhexe gaar ahaan Cadale waxaa weli ka taagan xiisad u dhaxeyso dadka deegaanka oo loo yaqaan Macawiisleyda iyo ciidamo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana dagaaladaas ka dhashay khasaro soo gaaray dhinacyada dagaalamay.
Al-Shabaab ayaa dagaal kula jirto ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM, waxaana mararka qaar ay dagaalamaan dad shacab ah oo aan ku qanacsaneyn qaabka awoodda ku dhisan oo ay meelo ay joogaan ku maamulaan.
Previous articleDhalinyaro Soomaaliyeed oo guulo taariikhi ah kasoohooyay ciyaaro lagu qabtay dalka Jabuti
Next articleFariimo ceynkee ah ayey direysaa Imaanshiyaha Geelle ee Muqdisho ???